Didi အပါအ၀င္ အြန္လုိင္း ကား အငွား ပလက္ ေဖာင္း မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာန မ်ားမွ ေမးျမန္း - Pandaily
Didi အပါအ၀င္ အြန္လုိင္း ကား အငွား ပလက္ ေဖာင္း မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာန မ်ားမွ ေမးျမန္း
Feb 16, 2022, 19:23ညနေ 2022/02/16 23:15:25 Pandaily
အရHenan စီးပွားရေး နေ့စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ Henan ပြည်နယ်ရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များသည် Didi Global , Jiangnan Travel, People Travel, Patak နှင့် Cui Chi Travel အပါအ ၀ င် အွန်လိုင်း ကား ငှားရမ်း သည့် ကုမ္ပဏီ ငါးခု ကိုပူးတွဲ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်။
အင်တာဗျူး က ထောက်ပြ သည်မှာ မကြာသေးမီက အချို့သော ကုမ္ပဏီများသည် စျေးနှုန်း ချိုသာ သော မော်ဒယ် များ၊ လိုက်နာ မှုမရှိသော ယာဉ် များနှင့် ယာဉ်မောင်း များအတွက် အမှာစာ များ သတ်မှတ် ခြင်းနှင့် မြို့ပြ ခရီးသည် လိုင်း များကို တရားမ ၀ င် လည်ပတ် ရန် အွန်လိုင်း ကား များအပေါ် မှီခို ခြင်းစသည့် ပြ problems နာ များ ရှိသည်ဟု ထောက်ပြသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ပလက် ဖော င်းသည် ပလက်ဖောင်း အော်ပရေတာ များ၏ ၀ င်ငွေ ဝေစု ကိုတိုးမြှင့် စေပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော အချိန်ဇယားဆွဲ ခြင်းနည်းလမ်း ကိုကျင့်သုံး ခဲ့သည်။ ဤ အလေ့အကျင့် များသည် မျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု နှင့် စျေးကွက် စီးပွားရေးကို အနှောက်အ ယှက် ဖြစ်စေ ရုံသာမက ဌာနဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုနှင့် ယာဉ်မောင်း များနှင့် ခရီးသည် များ၏ တရားဝင် အခွင့်အရေးများကို ပါ ထိခိုက်စေ သည်။
အာဏာပိုင်များက Didi ၏ လိုက်နာ မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကိုအထူး ထောက်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ လမှ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်အထိ ကုမ္ပဏီသည် အွန်လိုင်း ကား အမှာစာ ၃၄ ၃၇ ၈၅ ၁၂ ကိုစုဆောင်း ခဲ့ပြီး Henan ပြည်နယ် တွင်ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် လိုက်နာ ရမည့် မော်တော်ယာဉ် များအတွက် အမှာစာ အရေအတွက်မှာ ၁၉၇ ၅၉, ၆ ၃၅ ဖြစ်ပြီး အမှာစာ ပြီးစီး မှုနှုန်းမှာ ၅၇. ၄၈% ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ လိုက်နာ ရမည့် ယာဉ်မောင်း များသည် အမှာစာ ၂၆, ၁ ၇၇, ၈ ၂၃ ကို ပြီးစီး ခဲ့ပြီး အမှာစာ ပြီးစီး မှုနှုန်းမှာ ၇၆. ၁၅% ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Didi သည် ဌာန အားလုံး နီးပါးကို လွှမ်းခြုံ ရန် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်း ကိုစတင် ခဲ့သည်
စည်းမျဉ်း အေဂျင်စီ အွန်လိုင်း ငှားရမ်း ခြင်း ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့ ၏ပြ problems နာ များနှင့် လုံခြုံ မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု အန္တရာယ် များ၏ လျှို့ဝှက် အန္တရာယ် များကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် အွန်လိုင်း ငှားရမ်း ခြင်း လုပ်ငန်း၏ စံ သတ်မှတ်ထား သော၊ ကျန်းမာ ။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုကိုမြှင့်တင် ရန်လိုအပ်သည်။